Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Ali oo ku guuleystay abaalmarinta Nabadda ee Nobel Peace Prize
Mogadishu - 15:15:54
Friday October 11, 2019 - 22:18:10 in Wararka by Super Admin
Ra’iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed Ali ayaa ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize 2019, isagoo ku muteystay dadaalkii dheeraa uu ku bixiyay in uu soo afjaro dagaal xuduudeedkii 20-ka sano ka dhexeeyay Ethiopia iyo Eritrea.
Abaalmarinta oo guddigii bixinayay ay kaga dhawaaqeen magaallada Oslo ee caasimadda Norway ayaa waxay caddeeyeen in Abiy Ahmed oo 43 jir ah uu mudan yahay abaalmarintan maadaama uu nabad ka dhaliyay Geeska Afrika.
Sidoo kale waxa uu qayb weyn ka qaatay Abiy Ahmed in Sudan ay yeelato dowlad ay ku mideysan yihiin ciidanka iyo shacabka kaddib markii xilka laga tuuray madaxweynihii hore ee waddankaasi Omar Al-Bashir oo Sudan xukumayay ku dhowaad 30 sanadood.
Madaxweynayaasha caalamka ayaa u soo hambalyeeyay Abiy Ahmed, waxaana sidoo kale hay’adaha xuquuqda Aadanaha Amnest International iyo Qarammada Midoobay Xoghayeheeda guud Antonio Guterres ay si gooni ah hambalyo ugu direen ra’iisul Wasaaraha Itoobiya.
Jaa'isadda Nobel Peace Prize waxaa aas aasay ganacsadihii dhanka warshadaha ee Alfred Nobel sanadkii 1895, waxaana markii ugu horreysay la bixiyay sanadkii 1901, iyadoo Sweden bixinta abaalgudkan ay kula mideysan tahay Waddanka Norway oo guddi ka kooban 5 xubnood loo xil saaray inay bixiyaan tan iyo 1990-kii.
Dhanka qiimaha lacageed ee abaalmarintani wadato ayaa gaareysa 900,000 oo dollar.